State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi receives Foreign Affairs Minister of Timor-Leste – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi receives Foreign Affairs Minister of Timor-Leste
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar, received Mr. Dionisio da Costa Babo Soares, Minister of Foreign Affairs and Cooperation of the Democratic Republic of Timor-Leste, at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw on 12 June 2019 at 11 am during his official visit to Myanmar.
During the meeting, the State Counsellor and Timor-Leste Foreign Affairs and International Cooperation Minister discussed cordially to promote existing bilateral relations and cooperation between the two countries, regional cooperation and application of Timor-Leste for ASEAN Membership.
Present at the meeting were U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation, Senior Officials from the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Joao Freitas de Camara, Ambassador of Timor-Leste to Myanmar and the members of the Timor-Leste delegation.
Ealier on the same day, U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation, also received Mr. Dionisio da Costa Babo Soares, separately at the Ministry of Foreign Affairs and discussed on various matters of the latest developments in Myanmar and Timor-Leste, promoting cooperation between the two countries in energy, trade and investment sectors as well as cooperation in international arena and application of Timor-Leste for ASEAN Membership.
Afterwards, U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation, hostedaluncheon in honour of Mr. Dionisio da Costa Babo Soares, Minister of Foreign Affairs and Cooperation of the Democratic Republic of Timor-Leste and the delegation at Hilton Hotel in Nay Pyi Taw.
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က တီမောလက်စ်တေဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
(၁၂-၆-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးလာရောက်လျက်ရှိသော တီမောလက်စ်တေ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Dionisio da Costa Babo Soares အား ၁၂-၆-၂၀၁၉ ရက်၊ နံနက် (၁၁၀ဝ) နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-တီမောလက်စ်တေ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် တီမောလက်စ်တေနိုင်ငံမှ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ရေးကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တီမောလက်စ်တေ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Joao Freitas de Camara နှင့် တီမောလက်စ်တေ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းနေ့ နံနက်အစောပိုင်းတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် တီမောလက်စ်တေ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Dionisio da Costa Babo Soares အား နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ သီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တီမောလက်စ်တေနိုင်ငံတို့၏ နောက်ဆုံး ပြည်တွင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များ၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍနှင့် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေး၊ တီမောလက်စ်တေနိုင်ငံမှ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ရေးကိစ္စရပ် များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်မှ တီမောလက်စ်တေ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီး H.E. Mr. Dionisio da Costa Babo Soares ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား နေပြည်တော်ရှိ Hilton ဟိုတယ်၌ နေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။